(tonga teto avy amin'ny Mikea (mpaminany))
I Mikà na Mika na Mikea dia mpaminany voaresaka ao amin'ny Baiboly. Tany amin'ny tanàna atao hoe Moreseta ao atsimon'ny Fanjakan’i Jodà no nonenany ary tamin’ny andron'ny mpanjaka Jotama sy Ahaza (na Akaza) ary Hezekia (na Ezekiasa) no fotoana nahavelomany. Niaina tamin’ny fotoana mitovitovy i Mikà sy i Hosea ary i Isaia. Nanomboka ny asam-paminaniana izy teo anelanelan'ny taona 737 sy 696 tal. J.K. Nankahala ny fianinana an-drenivohitra izay ahitana karazam-pahotana maro izy sady nanao izay hiverenan'ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana ara-tsosialy. I Mikà dia niasa amin'ny maha mpaminany azy tao amin'ny Fanjakan'i Jodà talohan'ny famaboana ny tananan'i Samaria tamin'ny taona 722 tal. J.K. sady nanatrika ny fandravana nataon'i Sankeriba ny Fanjakan'i Jodà tamin'ny taona 701 tal. J.K.
Nivantana tamin'i Jerosalema indrindraindrindra ny hafany. Naminany ny handravana an'i Jerosalema sy an'i Samaria izy, ny handravana sy ny hanorenana indray amin'ny ho avy ny Fanjakan'i Jodà, ary nanome tsiny ny vahoakan'i Jodà izy amin'ny fangalarany sy ny fanompoan-tsampiny. Naminany ny hahaterahan'ny mesia ao Betlehema izy.
Sahala amin'i Isaia, i Mikà koa dia nitsikera ireo mpisorona nanan-karena sy ireo manam-pahefana ary ireo mpaminany sandoka izay nahazo ny fahefana sy ny tombontsoa rehetra. Notsikerainy torak'izany koa ny fanararaotan'ireo olona ao amin'ny saranga ambony tao Jerosalema sy ny fampiasana ny fivavahana mba hanafenana ny tsy fahamarinana nanjaka teo amin'ny fiaraha-monina.
Atao hoe מִיכָה הַמֹּרַשְׁתִּי / Mīḵā haMmōraštī izay midika hoe "Mikà ilay Morastita" i Mikà amin'ny teny hebreo., noho izy avy Moreseta-Gata any atsimo andrefan'i Jodà.
Hosea na Osea - Joela na Jôely - Amosa na Amôsy - Obadia na Abdiasa - Jonà na Jônasa - Mika na Mikea - Nahoma - Habakoka - Zefania na Sôfônia - Hagay na Akjea - Zakaria - Malakia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikà_(mpaminany)&oldid=975906"
Voaova farany tamin'ny 20 Oktobra 2019 amin'ny 18:39 ity pejy ity.